किन हुन्छ मूत्रनलीको संक्रमण ? यसको पीडा कम गर्न के गर्ने ? | Ratopati
किन हुन्छ मूत्रनलीको संक्रमण ? यसको पीडा कम गर्न के गर्ने ?
धेरैले भोगेको समस्या हो, पिसाबको संक्रमण । पिसाब गर्दा दुख्ने, पोल्ने हुँदा अत्यन्तै पीडा हुने यो संक्रमण महिला र पुरुष दुवैलाई हुन्छ । यसलाई चिकित्सकको भाषामा युटीआई अर्थात युरिनरी ट्र्याक इन्फेक्सन भनिन्छ । यौनाङ्गको विशेष हेरचाह र सरसफाईमा ध्यान नदिँदा धेरैजसो यो समस्या हुने गर्छ । मासिक श्राव, गर्भावस्था, असुरक्षित यौनसम्पर्क आदिका कारण यो समस्या देखा पर्ने गर्छ ।
पिसाब नली एकदमै संवेदनशिल हुन्छ । यस्तो अंगमा संक्रमण फैलने खतरा पनि बढि नै हुन्छ । पिसाब पास हुने नलीको राम्ररी सफाई नभएको अवस्थामा संक्रमण मुत्राशयसम्म पुग्ने गर्छ ।
-शरीरमा पानीको मात्रा कम हुनु
-करङको हड्डीमा चोट लाग्नु
-पुरुषहरुमा प्रोस्टेट ग्लैडको बढेमा
-दुर्गन्धित शौचालयको प्रयोग
-२ चियाचम्चा स्याउको रस र एक चियाचम्चा मह मनतातो पानीमा मिसाएर पिउँदा संक्रमण फैलाउने ब्याक्टेरिया नष्ट हुन्छ र पिसाब सजिल्यै बाहिर आउन मद्दत पुग्छ ।
-पिसाबमा हुने संक्रमणको समयमा पटक–पटक पिसाब आएमा १ चियाचम्चा सोडा १ गिलास पानीमा मिसाएर खाँदा पेटमा हुने जलन कम हुन्छ र पीडा कम हुन्छ ।
-अलैँचीलाई पिसेर धुलो बनाउने र अनारको रसमा मिसाउँने र थोरै थोरै नुन राखेर पिउँदा पिसाबको संक्रमण २ दिनमै निको हुन्छ ।
-लस्सी पनि यस इन्फेक्सनको लागि फाइदाजनक हुन्छ । इन्फेक्सन भएको समयमा हरेक दिन लस्सी पिउने गर्नुपर्छ ।
-क्र्यानबेरी जुुस पनि यसको लागि लाभकारी हुन्छ । ३ वा ४ दिनसम्म यो जुसको सेवन गर्दा आराम मिल्छ ।
-लसुनमा प्राकृतिक रुपमै ब्याक्टेरियासँग लड्न सक्ने क्षमता हुन्छ । हरेक दिन एउटा पोटी लसुन र पानी सेवन गर्दा यो समस्या कम हुन्छ ।
-यसका साथै, यौनाङ्गको सरसफाईमा विशेष ध्यान दिने, पिसाव नरोक्ने, पानी पिउने आदि गर्दा यो समस्याबाट छुटकारा पाउन सकिन्छ ।
यी देश जसले कोरोना महामारी जिते